décembre 2020 · déliremadagascar
Mifanindran-dàlana ny asa hiatrehana ny hamehana, indrindra fa ny fanampiana ny mponina marefo eo amin’ny lafiny sakafo sy rano, ary ny fametrahana ny tetika lavitrezaka hanafoanana ny kere. Continuer la lecture →
Afaka manao « arbitre » na mpanentana ara-panatanjahantena amin’ireo fifaninanana eto Madagasikara. Continuer la lecture →
Ho an’ny Ravinala Airports, misahana ny fitantanana ny seranam-piaramanidina eto Antananarivo sy Nosy Be dia ny miara-dalana amin’ny fanajàna sy ny fanampiana ny mponina mipetraka manodidina ny toerana hiasany ny fampandrosoana ny foto-drafitrasa momba ny seranam-piaramanidina. Continuer la lecture →
Fitaovana iray entina miady amin’ny tsy fahampian-tsakafo, ny fiovaovan’ny toetrandro ary miaro ny harena voanjanahary kanefa mampitombo ny vokatry ny fambolena ny “agro-écologie” na ny fambolena maharitra, araka ny andrana sy ny fikarohana maro nataon’ireo firenena mandroso. Continuer la lecture →
Na dia teo aza ny fihibohana noho ny Covid-19 dia niezaka ny ESTIIM nahatafita ny mpianatra ity onveriste tsy miankina amin’ny fanjakana ity. Continuer la lecture →
Fety miavaka. Rehefa misy ny hetsika ara-sosialy dia matetika mirona any amin’ny be antitra sy ny ankizy ny fanomezana. Iaraha-mahalala fa sahirana ny ankamaroan’ny mpianatra amin’ny sekolim-panjakana. Continuer la lecture →
Reharehan’ny sekoly ireo mpianatra nahavita ny fianarany. Tontosa ny 23 desambra 2020 teny Sabotsy Namehana ny famoahana ny andiany TAFARAI (Tambatra-Fanamby-Raitra) ao amin’ny oniversite HPI/MASCA Sabotsy Namehana. Continuer la lecture →
“Andao iarahana mifehy ity valanaretina Covid-19 ity”. Fanirian’ny ministeran’ny fahasalamam-bahoaka ny hananan’ny vahoaka Malagasy fahasalamana ao anatin’izao fetin’ny faran’ny taona izao. Continuer la lecture →
“Tsy dia misy loatra ny manao fivoriana tahaka izao”. Tao anatin’ny roa andro dia nifampizara ny traikefany, nampahafantatra ireo voka-pikarohana momba ny famokarana eny amin’ny tontolo ambanivohitra ireo mpandray anjara tamin’ny atrikasa “interface recherche et développement”. Continuer la lecture →
SEKOLY NOTRE DAME DE FATIMA AMBOHIMIRARY : Hiezaka hanao tsaratsara kokoa amin’ny 50 taona manaraka
Naorina ny sekoly mba tsy ho tapaka ny fianaran’ny ankizy. Natomboka tamin’ny fomba ofisaly ny 20 Desambra 2020 ny fankalazana ny taon-jaobily faha 50 taonan’ny sekoly Notre Dame de Fatima Ambohimirary ary hitohy amin’ny taona 2021 izany. Continuer la lecture →